Dowladda Uganda oo Shaqada Ka Erisay Saraakiil sar-sare – Radio Daljir
Seteembar 8, 2015 6:02 b 0
Talaado, September 08, 2015 (Daljir) — Qaar kamid ah saraakiisha wadanka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM ayaa ganaax iyo shaqo ka cayrin lagu sameeyey kadib weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee Alshabaab ku qaadeen saldhiga Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Kuxigeenka afhayeenka ciidamada Uganda Henry Obbo ayaa sheegay in Ilaa saddex sarkaal shaqadii laga joojiyey, iyadoo la-tixgelinayo qaabkii uu weerarku u dhacay iyo sida ay Alshabaab ugu fududaatay inay saldhigaasi galaan.
Magacyada saraakiisha shaqada laga fariisiyay ayaa lagu kala sheegay Korneyl Bosco Mutambi oo ahaa taliyaha ciidamada 16, Major Noel Mwesigye taliyihii guutada 13 iyo Captain Swaibu Yuusuf taliyihii guutada weerarka loo geystay.
Ugu dambayntiina Henry Obbo ayaa sheegay in arrintaani aysan ahayn mid cusub oo ay qayb ka tahay shaqada caadiga ah ee dhanka ciidamada, inkastoo uu carabaabay in arrinta ugu muhiimsan ay ahayd weerarkaasi iyo qaabkii uu u dhacay.
Qaxooti Soomaali ah oo ku xaraysan Xerada Xagaredheer ee Kenya oo Deeq la Gaarsiiyay